USA: Xisbiga Trump Oo Lagala Wareegay Aqlabiyadda Aqalka Wakiillada, Ka Dib Doorashada Guud Ee Dalka Maraykanka | Berberatoday.com
USA: Xisbiga Trump Oo Lagala Wareegay Aqlabiyadda Aqalka Wakiillada, Ka Dib Doorashada Guud Ee Dalka Maraykanka
USA(Berberatoday.com)-Xisbiga dimuqraaddiga ee Dalka Mareykanka ayaa la wareegay aqlabiyadda aqalka wakiillada ee loogu tartamay doorashadii xilliga dhexe, taasoo dhabar jab ku noqonaysa Madaxweyne Donald Trump.
La wareegista maamulka aqalka hoose ee Koongareeska oo noqotay markii ugu horreysay muddo 8 sano ah waxay xisbiga Dimuqraaddiga u sahleysaa iney fashiliyaan qorsheyaasha Madaxweynaha. Hase-ahaatee xisbiga Mr Trump ayaa la filayaa iney xajistaan awoodda ay ku leeyihiin aqalka odayaasha ee Senete-ka.
Doorashadii dhacday Shalay oo Salaasa ahayd ayaa loo arkay mid afti u ah awoodda maamul ee Madaxweynaha, inkastoo aanu doorasho u taagneyn tan iyo sannadka 2020-ka.
Hoggaamiyaha aqalka ee xisbiga Dimuqraaddiga Nancy Pelosi, oo lagu wado iney noqoto afhayeen, xilkaasna heysay tan iyo sannadkii 2007-dii, ayaa iyadoo taageerayaasha kula damaashaadeysa magaalada Washington waxay tidhi “Waad mahadsantihiin, wuxuu waa cusub u baryayaa Mareykanka”.
Madaxweyne Trump ayaa doorashada diiradda ku saaray aqalka Senete-ka, wuxuuna isku amaanay dedaalka uu sameeyay.
Xisbiga Dimuqraaddiga ayaa ka faa’iideystay hadallada qallafsan ee uu Trump kaga soo horjeeday dadka soo galootiga ah, waxayna guul ka gaadheen doorashadii ugu horreysay ee ka dhacday guud ahaan dalka wixii ka dambeeyay marka uu Madaxweyne Trump xilka qabtay 2 sano ka hor.
Hadda waxay dimuqraaddigu billaabi karaan baadhitaanno ku aaddan sida uu maamulka Trump u maareeyo arrimaha ganacsiga, laga billaabo canshuur celinta ilaa danihiisa ka hor imaanaya howlaha ganacsi ee Qaranka.
Xisbiga Dimuqraaddiga ayay sannadkan ku adkeyd iney guul la taaban karo ka soo hooyaan tartanka aqalka sare maaddaama ay difaacanayeen 26 kursi, halka xisbiga jamhuuriguna ay difaacanayeen 9 kursi oo kaliya.
Guulaha ugu waaweyn ee xisbiga Jamhuuriga waxay ka yimaaddeen gobollada Indiana, Missouri iyo North Dakota, halkaasoo ay xilalka uga fara maroojisteen siyaasiyiintii ka soo jeedday Dimuqraaddiga.